Savorovoro - Oniversite Fianarantsoa :: Niady, nifampitora-bato, sady nanimba zavatra ireo samy mpianatra • AoRaha
Raikitra ny fifandonana teo amin’ny samy mpianatra tany amin’ny oniversiten’Andrainjato any Fianarantsoa, omaly. Ny mpianatra avy ao amin’ny sampam-pianarana Lalàna, Toekarena, Fitantanana ary Haifiarahamonina na Degs sy ny sampam-pampianarana siansa no nifanandrina, nifampikasi-tanana mihitsy. Araka ny fampitam-baovao dia tsy nety niaraka manatanteraka ny tolona iraisan’ny mpianatra ao amin’ny oniversite ny ankilany tamin’izy ireo fa nanohy ny fianarany. Raikitra ny tora-bato, izay niafara tamin’ny famotehana fotodrafitrasa maro.
“Nisy savorovoro tokoa teto amin’ny oniversite vokatry ny tsy fankasitrahan’ny mpianatra ny tenimita navoakan’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa (Mesupres). Nitarika tsy fito­vian-kevitra teo amin’ny mpi­anatra roa tonta izany satria tsy voakasik’io ny sampam-pianarana Siansa. Niteraka famotehana ny fananan’ny oniversite, indrindra ny tao amin’ny Degs, ny zava-misy”, hoy Rafamantanantsoa Fontaine, filohan’ny oniversiten’i Fianarantsoa tamin’ny rakitsary tao amin’ny tambajotra serasera, omaly.
Fotodrafitrasa maro no simba tamin’ity fihetsiketsehan’ny mpianatra ity, toy ny fitaovam-pianarana, trano
fianarana, katedraly, faha­maizan’ny trano fitahirizana taratasy.
Manameloka ny herisetra niseho tao amin’ny oniversite itsy farany, indrindra ny famo­tehana ny fananam-panja­kana. Tsy maintsy handray andraikitra manoloana izao toe-draharaha izao ary hijery ny tompon’antoka tamin’io
fihetsiketsehana io ry zareo. Mbola hisy ny fivoriana ataon’ ireo mpitantana ny oniversite amin’ny fanapahan-kevitra mifanandrify tamin’ny koron­tana niseho tao amin’ny oniversite.
Tsiahivina fa manohitra ny fampiharana ny tenimita navoakan’ny Mesupres tamin’ ny 3 desambra lasa teo, izay manafoana ny seho karoka na “mémoire” sy ny “mini-mémoire” ny ampahan’ny mpianatra ao amin’ny oniversiten’i Fianarantsoa. Mitarika ny fanafoanana ny fizaran’asa izany. Ny fanadinana farany ihany no hifindrana amin’ny oniversite ho an’ny diplaoma DTS (Diplôme de technicien supérieur) sy ny “Licence”. Efa nifampitaona nanao
fitokonana izy ireo nanomboka tamin’ny zoma lasa teo.
Lozam-piarakodia :: Maty nohitsahin’ny kamiao iasany ny mpanampy ny mpamily
Fanafihana mitam-basy :: Lehilahy mpandalo naratra voan’ny bala tetsy Ambodifilao